Online mpandraharaha 32Red namoaka tanteraka ny aterineto lalao-fidiram-bola £30.4 m ny enim-bolana voalohany ny 2016. Izany dia mampiseho ny vokatry ny 63% amin'ny £18.6 m nitatitra fa ny tapany voalohany amin'ny 2015 wild wild west casino atlantika tanàna nj ora.
Ny mpandraharaha dia lazaina izany hitsangana ny "organika fitomboana ao amin'ny fototry ny raharaham-barotra", miaraka amin'ny fitomboan'ny fampiasam-bola ao amin'ny-barotra fandraisana andraikitra sy ny fandraisana anjara amin'ny Roxy Lapa online casino, nahazo ny 32Red ao ny £8.4 m fifanarahana tamin'ny volana jolay tamin'ny taon-dasa fampiharana isaky online poker amici. Ny fototra 32Red raharaham-barotra za-draharaha isan-taona amin'ny taona net vola miditra hitsangana ny 32% ny £23.5 m ho an'ny H1, raha ny any Italia manatrika ny raharaham-barotra nahita ny 33% ny fiakaran'ny vola miditra aterineto mba £1.1 m, ho tanteraka ny £24.6 m.
Roxy Lapa nandray anjara £5.8 m ny £30.4 m fitambaran'ny vola miditra aterineto. 32Red CEO Ed varotra samy hafa nilaza hoe: "izaho no faly ny tatitra hafa an-tsoratra ny vola miditra fampisehoana ho an'ny 32Red ao amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2016 fampiharana ny isan-mandidy ao jery mitongilana ny slot machine. "Izany maneho ny fototra hery ny raharaham-barotra: Ny mahery marika, kilasy voalohany mpanjifa sy ny varotra ny fahaizany.
"Ny tsara fivoarana dia tratra na dia eo aza ny tena mavitrika amin'ny fanatanjahan-tena tsena mankany amin'ny faran'ny vanim-potoana nifanindry tamin'ny Eoropeana baolina kitra championships fampiharana poker bonus senza deposito. "Izany no mampiseho ny antso 32Red marika sy ny mpanjifa traikefa ary koa ny fahafahana mialoha fa 32Red mba hanafaka ny fitomboana isika rehefa manararaotra barotra fahafahana.".